केहि नपाएपछि आरजुले बालेनमाथी लगाइन यस्तो आरोप, बालेनका समर्थक आक्रोसित !
काठमाडौं, असार ६ – नेपाली काग्रेसकी नेतृ एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाले स्वतन्त्र उमेदवारी दिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा भारी मतले निर्वाचित भएका बालेन शाह माथी अनौठो आरोप लगाएकी छिन् ।
देशमा स्वतन्त्रहरु प्रति क्रेज देखिएको भन्दै उनले अहिले कलाकार पनि कलाकारिता छोडेर राजनितीमा लागेको र पत्रकार पनि पत्रकारिता छोडेर राजनितीमा लागेको भनेकी छिन्। कलाकारिता छोडेर राजनितिमा लागको भनेर बालेनलाई संकेत गरेकि उनले पत्रकारिता छोडेर राजनितीमा आएको भन्दै रवि लामिछानेलाई भनेकी हुन् ।
त्यत्तिमा मात्रै नरोकिएकी उनले बालेनले रुटिन अफ नेपालबन्द नामक पेज खरिद गरेर आफ्नो पक्षमा प्रचार गराएरनै काठमाडौँका निर्वाचन बालेनले जितेको समेत आरोप लगाएका छिन् । आरजुले बालेनलाई रुटिन अफ नेपालबन्द कतिमा किन्नु भयो ? भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छिन् ।
पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘अहिले जनि पनि स्वतन्त्र जितेका छन् नि। उनीहरुले एउटा-एउटा गुण पहिचान गरेर नेता बनेका हुन् तपाईंले हेर्नुभयो सामाजिक सञ्जाल। बालेन शाहले कतिमा हायर गर्नुभयो रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई?
उनले त्यसलाई विश्लेषण गरेर परिचालन गर्दै शाहले राजनीति गरेको बताइन्। तर देश पार्टीका मान्छेले नै चलाउने उनको दाबी छ। नेपाली कांग्रेसले गर्दा स्वतन्त्र उठ्न पाएको पनि उनले टिप्पणी गरिन्।
उनको भनाइ छ, ुसंविधान लेख्ने बेला स्वतन्त्र राख्ने कि नराख्ने, थ्रेस होल्ड राख्ने कि नराख्ने विषयमा यति धेरै विवाद भएको थियो। हाम्रो त ३२ देखि ३४ प्रतिशत घट्दैन। एउटा मान्छेको पनि भनेको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो भनेर स्वतन्त्र उठ्न पाउने प्रावधान राख्यौं। हामीले लेखेको त्यही प्रावधानका आधारमा स्वतन्त्र उठेको हो।’
उनले स्वतन्त्र उठ्ने ह्वीम चलेको बताइन्। थपिन्, ‘पत्रकार पनि पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा लागेको छ। कलाकार कलाकारिता छाडेर राजनीतिमा लागेको छ।’
२०७९ असार ६, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 101 Views